အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့အား သီးခြားစီတွေ့ဆုံ | Amyotha Hluttaw
ဆက်လက်၍ ဗီယက်နမ်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဟိုချီမင်းနေထိုင်ခဲ့သော နေအိမ် ကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုလေ့လာကာ ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းတွင် လက်မှတ်ရေး ထိုးပြီး စုပေါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁၀ နာရီခွဲ တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည် ဗီယက်နမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်သို့သွား ရောက်၍ ဗီယက်နမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E.Madam Nguyen Thi Kim Ngan နှင့် တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံအကြား အပြန်အလှန်ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်ကိစ္စရပ်များ၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး စသည့်ကဏ္ဍစုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေး ပိုမိုခိုင်မြဲရေးနှင့် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုအောင်မြင်စေရေး တို့ကို ဆွေးနွေးကြသည်။
ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၄ နာရီခွဲတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည် ဗီယက်နမ် ဝန်ကြီးချုပ် H.E.Mr. Nguyen Xuan Phuc နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ရုံးတွင်လည်းကောင်း၊ ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် ဗီယက်နမ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး H.E.Mr. Nguyen Phu Trong နှင့် ကွန်မြူနစ်ပါတီရုံး၌ လည်းကောင်း နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် ဗီယက်နမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုလေ့လာကြပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းနှင့်အဖွဲ့အား ဗီယက်နမ်အမျိုးသား လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E.Madam Nguyen Thi Kim Ngan က ဗီယက်နမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။